Archive du 20171017
Ny firenena sahirana Ny mpitondra miliba
74 no efa matin’ny pesta hatramin’izao. Ao anatin’ny fisaonana tanteraka ny firenena noho ny nahalasan’ny Pr Zafy Abert, Raiben’ny demokrasia sy ny fampihavanam-pirenena. Ny delestazy miha mahery vaika andro aman’alina kanefa ny faktiora lasa avo roa heny
Fitsanganan’ny biraon’ny CFM Misy politika maloto sahady
Tafapetraka soa aman-tsara ny Biraon’ny Filan-kevitry ny fampihavanana Malagasy na ny CFM. Mipetraka dieny aty am-piandohana ny mety ho fiantraikan’ny fisain’ity rafitra ity hoe ho tonga amin’ny tanjona tratrarina sa hitsefotra toy ny teo aloha hatrany ?
Robain’ny sinoa ny harem-pirenena Gadraina izay sahy mijoro…
Tsy nisy akony intsony ny tohin’ny raharaha momba an-dRaleva, lehilahy iray sahy nijoro sy niteny ny zavatra hitany fa tsy mety amin’ny fanaovana ampihimamba ny fitrandrahana ny harena ankibon’ny tany ataon’ny sinoa any Vohilava Mananjary. Ny fanehoan-kevitra nataony kosa no antony fa niteraka ny fisamborana sy ny fanagadrana azy.
Zandary lavo tany Betroka Maty noho ny hatairana ihany koa ny reniny
Maty voatifitry ny dahalo tany Betroka ny 13 oktobra lasa teo ny zandary iray kilasy faharoa Ralaivao René Germain, vao erotrerony tokoa. Nandritra ny fifanenjehana tamin’ny dahalo tany Betroka no nahalavo azy, ka raha ny fanazavana azo teo anivon’ny seraseran’ny zandarimariam-pirenena, dia mody nifangaro tamin’ny fokonolona ireo dahalo ka nodidiny ho eo afofoany ity zandary ity avy eo.
Kick Boxing Resin’ny Zanakala 7-6 i La Réunion
Mbola noporofoin’ny mpiangaly ny taranja Kick Boxing Malagasy avy ao amin’ny Club Zanakala indray mandeha indray fa mafy ary mahafehy tsara io taranja io izy ireo raha ny eto amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina.
Edito Samy Malagasy
Nampihetsi-po ny maro ny famerenana ilay hira « Samy malagasy » nandritry ny fanomezam-boninahitra farany an’ny Profesora Zafy Albert tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina omaly.
Aretin’ny voa Lafo loatra ho an’ny Malagasy ny fitsaboana azy
Ankoatra ny aretina homamiadana dia anisan’ny areti-mandoza iray tena atahoran’ny olona ihany koa amin’izao ny aretin’ny voa. Mahatratra 5 tapitrisa Ar isam-bolana mantsy ny vola ilain’ny marary iray mba hanaovany “dialyse” in-telo isan-kerinandro raha miandry fahafatesana kosa rehefa tsy manana.
Mitombo ireo matin’ny pesta Voafetra ny afaka manao fitiliana
Nambaran’ny filoham-pirenena nandritra ny fitsidihany ny toeram-pitehirizana fanafody SALAMA eny Tanjombato ny 10 oktobra teo, fa ampy tsara ny tahirim-panafody hiatrehana ny valan'aretina pesta. Efa misy rahateo ny fanaganana ny "cellule de crise" eo anivon'ny minisiteran'ny fahasalamana, mba mifehy sy miatrika ny valan’aretina.
Fahatapahan-jiro lavareny Lasibatra hatrany Itaosy sy ny manodidina
Efa maro ihany izay fitraorana sy fitokonana nisy teny Itaosy sy ny manodidina izay noho ny fahatapahan-jiro matetika loatra eny an-toerana saingy tsy voavaha hatramin’izao ny olana.
Tetikasa hiarahana amin’ny Maraokanina Hanomboka tsy ho ela ny asa ao Antsirabe
Raikitra ary hatomboka tsy hoe ela intsony ny tetikasa roa sosona hiarahan’ny kaominina Antsirabe amin’ny firenena Maraokanina. Delegasionina nafonja no tonga tao Antsirabe avy amin’ny firenena Maraokanina omaly alatsinainy, nijery ny pitsopitsony amin’ny hanombohana ny asa amin’izay.